कर्णालीमा ‘रेलको बाटो’- कला - कान्तिपुर समाचार
सडक यातायातले नछोएको एक मात्र जिल्ला हुम्लामै पुगेर उनी छायांकन गर्न चाहन्थे । समूहलाई त्यहाँ पुर्‍याउने नसकेपछि हुम्लाजस्तै पीडा बोकेको अर्को जिल्ला डोल्पामा पुगेर छायांकन गरे ।
चैत्र ७, २०७७ कलेन्द्र सेजुवाल
सुर्खेत — पुरानो ढुंगेघर । काठको खाँबोमा रेडियो झुन्ड्याइएको छ । रेडियोमा समाचार बज्छ– ‘सरकारले केही समयभित्रै रेल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालेको छ, चीनको केरुङ नाकाबाट काठमाडौंसम्म रेल सञ्चालनको लागि तयारी थालिएको हो ।’
आम नेपालीलाई सुखद लाग्ने यो समाचार सकिएलगत्तै दृश्य फेरिन्छ । म्युजिक भिडियोमा विकट हिमाली गोरेटोमा घोडा डोर्‍याउँदै हिँडिरहेका स्थानीय बासिन्दा देखिन्छन्, जसले रेडियोमा बजेको सुखको समाचारलाई मिथ्या सावित गर्छ । गीतमा यसरी शब्दहरु बग्न थाल्छन्–
रेलको बाटो पुग्दै छ रे तिमी बस्ने सहरैमा
हुम्ला कहिले मोटर आउला बस्याको छु रहरैमा
‘रेलको बाटो’ नामक म्युजिक भिडियोले वास्तवमै नेपाल सरकारले देखाएको रेलको सपना र कर्णालीको अवस्थाबारे सोचमग्न बनाएको छ । उपल्लो डोल्पामा छायांकन गरिएको म्युजिक भिडियोका प्रमुख कलाकार चिरञ्जीवी सापकोटा (जीबी चिरन) भन्छन्, ‘जनतालाई समृद्धिका सपना सुनाउन पाइन्छ तर दु:खका कथा यथावतै राखेर सुनाइने सपनाको के अर्थ हुन्छ र ?’
सरकारले रेलको सपना सुनाइरहँदा कर्णालीको पीडा कति गहिरो छ भन्ने कुरा उनले भिडियो छायांकनमै पनि अनुभूति गर्न पाए । सडक यातायातले नछोएको देशको एक मात्र जिल्ला हुम्लामै पुगेर उनी भिडियो छायांकन गर्न चाहन्थे । तर १० जनाको समूहलाई त्यहाँ पुर्‍याउने कसरी ? त्यसैले उनले हुम्लाजस्तै पीडा बोकेको अर्को जिल्ला डोल्पामा पुगेर भिडियो छायांकन गरे । ‘हामी हुम्लामै पुगेर गीत छायांकन गर्न चाहन्थ्यौं तर आर्थिक अभाव र त्यहाँसम्म पुग्ने सहज पहुँचमार्ग नहुँदा सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘अब फिमेल भर्सनका लागि हुम्लामै पुगेर छायांकन गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
करिब ७ मिनेट लामो म्युजिक भिडियोमा उपल्लो डोल्पाका दृश्यले शब्दलाई थप शक्तिशाली बनाएका छन् । लेखराज गिरीले कर्णालीको वास्तविक जीवनलाई शब्दमा सरल ढंगले उतारेका छन् ।
सिटामोलको अभावमा मर्नुपर्ने कोही
चोट लागे, भोक लागे बस्नुपर्ने रोही
त्यतिमात्र होइन, गीतमा कर्णाली र सहरको अवस्थालाई तुलना पनि गरिएको छ । सहरमा रेल आउने तयारी भइरहँदा हुम्लामा गाडी नपुगेजस्तै विकासका अन्य सूचकमा पनि कर्णाली पछि परेको शब्द–दृश्यमा उतारिएको छ ।
तुइन चढी स्कुल जान्छन्, नानीबाबु गाउँमा
कालो गाडी चिल्ला गाडी, होलान् तिम्रो ठाउँमा
दाउरा–घाँस खाली खुट्टा छैनन् चप्पल–जुत्ता
रातो कार्पेट ओछ्याउँछन् रे तिम्ले टेक्दा उता
गायक तथा मोडेल सापकोटाका साथै सरस्वती खत्री र लक्ष्मण देवकोटाको जीवन्त अभिनयले कर्णालीको पीडालाई वास्तविकतामा उतारेको छ । सुरज पण्डितले सुमधुर स्वरमार्फत कर्णालीका दु:खका सुस्केरा सुसेलेका छन् । म्युजिक भिडियो छायांकन गर्ने क्रममा एक जना कलाकारलाई लेक लागेर हेलिकप्टरबाट उद्दार गर्नुपर्‍यो । खर्च पनि अनुमान गरेभन्दा दोब्बर बढी भयो । तैपनि ‘रेलको बाटो’ टिमले यसको हरेस खाएको छैन । युट्युबमा म्युजिक भिडियो अपलोड भएको एक सातामै करिब साढे ७ लाखभन्दा बढी भ्युज पाएपछि दंग परेका सापकोटा भन्छन्, ‘सरकारले रेलको सपना सुनाउँदै गर्दा हुम्लामा मोटर पनि पुर्‍याओस् भन्ने हाम्रो सदिच्छा छ ।’
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ २१:१५
प्रधानमन्त्री हैन, पार्टी बनाउन लागौं : देउवा
सर्तमा बाँधिएर सरकारमा जान हुँदैन : प्रकाशशरण महत
चैत्र ७, २०७७ रमेशकुमार पौडेल
चितवन — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डेढ–दुई वर्षमै चुनाव हुने अवस्था रहेकाले अब प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन् । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन फिर्ता नलिएकाले अहिलेको सरकारसँग बहुमत रहेको उनले बताए ।
‘चुनाव जहिले पनि आउन सक्छ । पार्टी एक बनाए बहुमत आउन सक्छ,’ चितवनको रत्ननगरमा पार्टीको तरुण विभागले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘यस्तो बेला पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री किन बनेन भन्छन् !’
सभापति देउवाले पार्टीभित्र झगडा हुनु ठूलो कुरा नभएको बताए । ‘एमालेमा झगडा छ । ओली र माधवमा झगडा छ । त्यो अस्वाभाविक हैन नि ! झगडा त हाम्रो पार्टीमा पनि छ । फेरि मधेसवादीमा पनि झगडा छ । अहिले नै झगडा गर्नेहरुले पछि झन् किन नगर्लान् ? त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर फँस्ने कुरा हुँदैन,’ देउवाले भने ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधवकुमार नेपालको सम्बन्ध, माओवादी र एमालेको सम्बन्ध र जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका हेरेर विचार गर्ने बताए । ‘त्यसैले प्रधामनमन्त्री हुन मेरा बाबै गरेर हिँडेको पनि छैन । टाउकोमा आए भाग्ने पनि छैन भनेको हुँ,’ देउवाले पुरानो भनाइ दोहर्‍याए ।
उनले एक डेढ वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव हुने हुँदा त्यता ध्यान दिन कार्यकर्तालाई अनुरोध गरे । ‘अर्ली इलेक्सन’को चर्चा चलेको हुँदा जुनसुकै बेला पनि चुनाव हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । उनले जनताका घरघर जान नेता कार्यकर्तालाई अपिल गरे ।
‘चुनावमा उठ्ने चाहना राखेको नेता कार्यकर्ता, पार्टी बलियो बनाउन चाहने नेता जनताको दैलोमा दु:ख सुखमा साथ दिन वर्षमा तीन पटक त पुगेको हुनु पर्‍यो नि ! जनताले सेवा गर्नेलाई चुनावमा जिताउँछ । त्यसैले जनताको समर्थन लिन लागौं,’ उनले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशशरण महतले माओवादी र मधेसवादीको सर्तमा बाँधिएर कांग्रेस सरकारमा जान नहुने बताए । ‘एमाले र माओवादी अलग भए पनि सांसद संख्या एमालेसँग धेरै छ । हामीले माओवादी र मधेसवादीका सबै सांसदको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर उनीहरुको सेवा सर्तमा बाँधिएर सरकारको नेतृत्व गर्नु हुँदैन । ओलीले अत्याचार नै गरे भनेर निसर्त समर्थन दिन्छन् भने विचार गर्न सकिन्छ,’ महतले भने । उनले अब हुने निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउने सम्भावना बढेकाले सजग भएर कदम चाल्नु पर्ने बताए ।
कांग्रेस नेता एनपी साउदले अपवित्र गठबन्धन गरेर सत्तामा गए निर्वाचनमा पार्टीले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने खतरा रहेको बताए । कांग्रेसका युवा तरुण विभाग संयोजक शंकर भण्डारीले पार्टीले कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्न नहुने धारणा राखे ।
कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दल रहे पनि पार्टीको तरुण विभागले कार्यक्रम राखेको हो । कार्यक्रममा तरुण दललगायतका भातृ संगठनलाई पूर्णता दिएर सक्रिय बनाउन कार्यक्रमका वक्ताहरुले पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका थिए ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ २०:४८